Suldaan Siciid iyo Doorashada Puntland | allsanaag
Suldaan Siciid iyo Doorashada Puntland
Suldaanka beesha Warsangeli Suldaan Siciid Cabdisalaam, ayaa maalmahan danbe Odayaal reer Maakhir ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta waxay leeyihiin, Suldaanku wuxuu doonayaa in Isaga keligii Xildhibaanada reer Maakhir soo xulo,
Hadaba arintan maxaa ka jira?
Marka hore beelaha Warsangeli ee Xildhibanada baarlamaanka Puntland ku leh, ayaa waxay kala yiniin Aadan Siciid, Bih idoor iyo Bahwadaagtooda Bah Majeerteen iyo Bahwdaagtooda , Dubeys, Gaashaanbuur, Reer Saalax iyo Warlabe.
Beelaha Gaashaanbuur iyo Garaad Cabdale iyo bahwadaagtooda maahee, beelaha kale ee Warsangeli ee Xildhibaanada baarlamaanka Puntland ku leh ayaa waxay samaysteen Garaad, Islaan, Suldaan. Iyaga ayaana xor u ahaa inay soo xulaan Xildhibaankooda. Suldaan Siciid ma tegin Dhahar, Habar Shiro, Buraan, Xingalool iyo qaybo ka mid ah Xaafadaha Badhan ee Xildhibaano lagu soo dooranayey.
Isimaddii ay beelahni samaysteen oo qura ayaa ka ma’suul ahaa doorashooyinkaas ka dhacayey degaanadaas , haddii ay cadaalad ahayd iyo haddi nin jeclaysi lagu soo saaray Xildhibaanadooda.
Su’aasha is waydiin mudan ayaa waxay tahay Intaan Garowe la tegin oo la joogay gobolka Sanaag beelihii ay Isimada u ahaayeen isimadani raali ma ka wada ahaayeen Xildhibaanka la doortay ee Garowe loo wado. Mise nin jeclaysi ayeey ninkii ay rabeen u soo saareen Isimadoodu oo u galbiyeen Garowe
Hadaba xaqiiqda dhabta ahi waxay tahay in maanta labada Xildhibaan ee banaanka jooga oo aan muran ku jirin oo aan Murashax kale dacalka haysani, oo aan arki doonin guddiga khilaafaadka, ay yihiin Mudane Cabdiraxmaan Cali Jibriil iyo Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Labada beelood ee laga soo kala doortayna ay yihiin labada beelood ee Garaad Cabdale iyo Bahwadaagahooda iyo Gaashaanbuur oo yagu Isimka saxiixayaa oo xalaaleenayaa uu yahay oo qura Suldaan Siciid. Doorashaddii la soo doortay Xildhibaanadana wax shaqo ah kuma lahayn Suldaanku. Ma fara gelin doorashadii lagu soo doortay.
Ugu danbayntii Xildhibaan ay beeli markii horeba ay wada jir iyo midnimo ku soo wada doorteen ciddi ma musuqmaasiqi karto. haddii ay taasi dhacdona waxa laga dareemi lahaa degaanadii uu ka tegeen Xildhibaanku ee laga soo doortay,
Garowe waxa yaalaa waa Isim nin jeclaysi ku geeyey, si Baarlamaanka Puntland uga mid noqdo iyo Murashax kale oo leh Adeeroow anigana miyaadan ahayn Isimkaygii. Haddii Isimkii labaatan jirsaday uu midayn waayey oo u caddalad fali waayey jufadiisa, soo lama oran karo Isimadii la sameeyey burburka ka dib hadaf kasta oo laga lahaa maalintaas weli meeshii ayaa la joogaa
← Banaabaxii Safaaradda Ethiopia ee London Isku tashugu waa iskaa wax u qabso →